Home Wararka Cabdiwali Gaas oo ka Carooday Diidmadii Rw khayre uu Diiday inuu ka...
Cabdiwali Gaas oo ka Carooday Diidmadii Rw khayre uu Diiday inuu ka Dhagax dhigo deeganka Garacad (Gaas Oo Safar ku tagaya Garacad)
Cabdiwali Maxamed Cali Gaas Madaxweynaha Maamul Goboledka Putland iyo Wafdi oo horkacayo ayaa u anba baxay degaanka Garacad ee Gobolka Mudug.
Madaxweyne Gaas iyaa lagu wadaa inu deegaanka Garacad ee Gobolka Mudug ka dhagax djigo Dekad, waxaana socdo abaabul lagu soo dhaenayo wafidaga uu horkacayo.
Rw khayre uu lagu waday inuu gaaro deeganka Garacad ayaa ka baaqday iyadoona khayre uu diiday in uu dhagax dhigo Dekad la qorsheenayo in laga dhiso deegaanka Garacad ee Gobolka Mudug .
Cabdawali Gaas oo arinkaasi ka caroooday ayaa usafray deekaanka Garacad, waxaa uuna sheegay in uu ka dhagax dhigayo deegaanka Gracad Dekad.
Waxaana socda diyaar garow lagu soo dhaweenyo wafdiga uu horkacaypo Madaxweyne Gaas iyadona deegaanka Garacad lagu arkayo dada farabadan u tuban wadyooonka.
Previous articleGolaha Ammanka ee QM Oo dib udhigay Xiliga ay Ciidanka AMISOM kabaxayan Soomaaliya(Sababta)
Next articleWafdi oo Hugaaminayo Cabdwali gaas oo Garaaya deegaanka Garacad ee Gobolka Mudug&Dekad cusub Oo halkaasi ka dhagax dhegay